Liverpool Oo Shaacisay Lacagta Ay Ku Iibinayso Xiddig Wacdaro Ka Dhigay Tartanka Euro 2020 - Laacib
HomeWararka Ciyaaraha MaantaLiverpool Oo Shaacisay Lacagta Ay Ku Iibinayso Xiddig Wacdaro Ka Dhigay Tartanka Euro 2020
Liverpool Oo Shaacisay Lacagta Ay Ku Iibinayso Xiddig Wacdaro Ka Dhigay Tartanka Euro 2020
Kooxda kubadda cagta Liverpool ayaa go’aamisay qiimaha ay ku iibinayso mid ka mid ah ciyaartoydii ugu wanaagsanaa tartanka qaramada Yurub ee gabogabada kusii dhowaanaya.
Jurgen Klopp ayaa qorshaynaya inuu isbeddello ku sameeyo safkiisa inta uu furan yahay suuqa iibka ciyaartoyda ee xagaagan, waxaanu oodda ka qaadayaa qaar ka mid ah laacibiinta aanu kalsoonida badan ku qabin, halka uu rajaynayo saxeexyo wax kusoo kordhiya safkiisa.
Liverpool ayay hore uga tageen Georginio Wijnaldum iyo Ozan Kabak, laakiin intaas kuma ekaanayaan, waxaana la filayaa in marka uu soo dhaamado tartanka qaramada Yurub ay baxaan ciyaartooyo kale.
Xiddiga khadka dhexe uga ciyaara xulka qaranka Switzerland ee Xherdan Shaqiri oo ka mid ahaa ciyaartoydii wacdaraha ka dhigay tartanka ayaa ugu horreynaya liiska ciyaartoyda ay Liverpool suuqa dhigayso.
Weeraryahanka reer Belgium ee Divock Origi oo muddo dheer oo uu joogay Liverpool ku qaatay kaydka, xilli ciyaareedkii ugu dambeeyeyna saluug laga muujinayay ciyaartiisa ayaa ku jira liiska ciyaartoyda lala xidhiidhinayo inay ka tegayaan Reds.
Takumi Minamino oo amaah ugu maqnaa Southampton qaybtii dambe ee xilli ciyaareedkii hore ayaa isaguna qayb ka ah xiddigaha aanu mustaqbalkoodu sugnayn ee go’aanka laga gaadhayo.
Liverpool ayaa haddaba go’aamisay qiimaha ay ku iibinayso Xherdan Shaqiri oo laba sannadood oo dhamaystiran ay ka hadhsan yihiin qandaraaskii uu kula jiray Reds.
Laacibkan oo sannadkii 2018 ay Liverpool kasoo iibsatay Stoke City, iyadoo kasoo bixisay £13 milyan oo Gini, ayaa u nuglaaday dhaawacyada, waxaana muddadii uu joogay Anfield uu inta ugu badan ku maqnaa dhaawac, halka kulamada kooban ee uu ciyaarana uu muujinayay in aanay tamartiisa iyo awooddiisu gaadhsiisnayn heer uu ku tartamo booskiisa.
Si kastaba, Liverpool ayaa waxay go’aan ka gaadhay qiimaha ay ku iibinayso Xherdan Shaqiri, waxaanay ku xidhaysaa kooxaha doonaya £13 milyan oo Gini oo ah lacagtii ay hore ugu soo iibsatay.